UPAPA WETAROT: KUTHENI UFANELE UZIHLONELE?
Kule nqaku, uya kuzazi zonke iinkcukacha malunga upopu wokubhengeza, ngubani na, intsingiselo yayo, kunye nokunye okuninzi. Sijoyine ukuze uqonde ngcono eli khadi le-tarot elinomdla. Iya kuba yinto emangalisayo!
1 UPapa tarot
1.1 Kutheni le nto kufuneka uyihloniphe?
2.1 Upopu wokubhengeza uMarseille
2.2 I-tarot kaPopu Jodorowsky
2.3 Upapa tarot Tiziana
Eli khadi linomdla le-tarot likwabizwa ngokuba nguMbingeleli oMkhulu okanye iHierophant, lelona liqela le enkulu arcana, Ngokuchazwa ngokubanzi kwaye. emva koko, kucace gca.
Ipapa ye-tarot yindawo entle kakhulu, kwizikhundla zayo ezahlukeneyo ngexesha lokusasazeka, ihlala inethemba kwiimeko. Inxulunyaniswa namandla omoya, amandla, intobelo, kunye nentando yokwenza.
Kutheni le nto kufuneka uyihloniphe?
Le arcana iphambili ibonisa igunya elipheleleyo, amandla kunye nobulumko. Isibonisa ucwangco, imigaqo nemithetho ekufuneka ilandelwe eluntwini ukuze yonke into isebenze ngendlela echanekileyo nenocwangco.
Xa ezi zinto zitshintshiweyo zivelisa isiphithiphithi kwaye eli khadi limele ukuthanda ukuthobela, ukuthobela oko sele kumiselwe, ngendlela yokuba, ukuba asithobeli, ukungenisa kuyafuneka kwaye sicele uxolelo ukuze samkelwe.
Ukutolika kwayo kuyahluka ngokuxhomekeka kwitotot esetyenzisiweyo, kodwa ngokubanzi sinokuchaza iimpawu zale arcana inkulu ihloniphekileyo kunye nentsingiselo yayo.
Eli khadi, kubalo, linenombolo 5, oko kuthetha ukuvisisana kunye nokulinganisela kwinto engaphakathi. Inxulunyaniswa nenxalenye yomoya, enye yezinto ezidale yonke into esiyaziyo, kwaye efuzisela unxibelelwano, uhlalutyo, ukuqiqa kunye nenkululeko epheleleyo.
Upopu we-tarot unamandla amakhulu, usikhokelela ekubeni siqwalasele iinyani kunye nezenzo. Inokumelwa kunye noluntu, izithethe, imigaqo emiselweyo, umthetho ekufuneka siwuthobele.
Kwi-archetype yoqobo, sinokubona indoda ejonge ukukhula kakhulu, ihleli etroneni yayo, kwaye iphakamisa isandla sayo sasekunene njengomqondiso wentsikelelo.
Intonga yobukhosi ayiphethe ngesandla sasekhohlo ineminqamlezo emithathu ebonakalisa amandla negunya analo. Le ntonga yintathu, ziindiza ezintathu apho kulawula khona uMbingeleli oMkhulu, sizicacisa ngezantsi:
Inqwelo moya: ibonisa ikhonkco kunye el mundo Womoya, ufuna ukufumana ubulumko ngolwazi malunga nale moya ingcwele.
Inqwelomoya: ixhasa ubuchule bokuqiqa, ukucinga, ukuqonda kunye nokomeleza ulwazi olufunyenweyo.
Inqwelomoya: yenza iodolo kwizinto zoluntu: imigaqo, imithetho. Igcina uqeqesho kwimilinganiselo yokuziphatha neyokuziphatha.
Ezinyaweni zalo mmeli mkhulu wolungelelwano namandla, kukho iimonki ezimbini eziguqe ngamadolo, ezicela ukufumana imvume yakhe kunye nentsikelelo ekhawulezileyo yokuqhubeka neendlela zabo.
Nganye kwezi monks inxiba imibala eyahlukileyo. Omnye obomvu obonisa isenzo kunye nokuziphatha komntu ngamnye, kwaye omnye unombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oqaqambisa ukuzithoba, ukuvuma ukuzithoba kunqulo lokucela uxolelo ngokungathobeli kwaye, kwangaxeshanye, usikelelwe.
Enye yezi monks iphethe umsongo kunye nayo, emele ubulumko bolwazi ekudala bufunyenwe kuye. Ezi monki zinokuqaqambisa iindawo apho kwabelwana khona ngezimvo kunye neenkolelo ezahlukeneyo.
Ufuna ukuqhubeka ufunda malunga 8 yeekomityiSiyakumema ukuba ungene kwikhonkco.
Upopu wokubhengeza uMarseille
En upopu tarot Marseille, singayitolika njengeleta ezele bubulumko, apho sinokubhenela khona ukuze sifumane ingcebiso ukuba siyayifuna. Isinika ukuqiqa, ukubonakalisa kunye nokuqonda ukuze sikwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo ngamaxesha ahlukeneyo.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo elungileyo, ibonisa ukuba kungafikelelwa kwizivumelwano ezixhamlisa abo babandakanyekayo, ngonxibelelwano kunye nolwakhiwo lwesicwangciso esimiswe kakuhle, ukuze sikwazi ukugqiba ngempumelelo.
Ukuba uzifumana ukwimeko enzima kunye neqabane lakho okanye umhlobo, unokukwazi ukusombulula yonke into kwincoko ethembekileyo nethembekileyo. Ukuba ucwangcise umtshato lo unokusebenza kakuhle kakhulu xa kukho imbeko kuni nobabini.
Ukuba ivela kwifom eguqulweyo ngexesha lomqolo, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ucinge ngaphambi kokwenza, kuba imeko inokuthi ikubandakanye kwiingxaki zokungekho semthethweni kunye nokungabikho kokusesikweni. Kuya kufuneka ulumke malunga neshishini, amashishini amatsha, ubudlelwane kunye nobuhlobo.
I-tarot kaPopu Jodorowsky
I-tarot kaPopu Jodorowsky, isibonisa ukuba ngubani i-arcana enkulu emele umhlaba, uthetha ngembalelwano abanayo ekuziphatheni kwabantu nakwizenzo zabo, kwaye, ewe, ziziphumo ezivela koku.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba upopu umele igunya eliphezulu, ngumgaqo osele umiselwe, yimigaqo ethe yaphunyezwa ukuze yonke into isebenze ngokufanelekileyo, kwaye ukuba kukho nayiphi na eyonakeleyo, kuya kubakho utshintsho olungenantlonelo kwaye, ke ngoko , kufuneka wohlwaywe.
Kuya kufuneka bohlwaywe ngezifundo zekarma ezinokuhlala ixesha elide de impazamo yamkelwe, yamkelwe, kwaye ukuthanda kungabikho kwenza iimpazamo ezifanayo. Ngale ndlela, umntu omtsha uya kuhlala eluntwini kwaye ahloniphe yonke into emngqongileyo.
Upopu tarot T.iiyana
Ngaloo ngqiqo, upopu tarot Tiziana, imele ukusebenza ngokuchanekileyo, ihlonipha oko sele kusekwe, ukuze yonke into ihambe njengoko kufanelekile.
Le arcana iphambili, ikwimo yayo elungileyo, ibonisa ukuba, nangona sonke senziwe ngeempawu zokuziphatha kunye nezentlalontle, ngaphakathi kuthi ngamnye wethu, ukuthanda ukwenza kakuhle kufuneka kubekhona.
Upopu uyileta enentlawulo eninzi yokomoya, esishukumisela ukuba sihloniphe izithethe nemigaqo, ukuze sikuqonde konke oku kwaye senze ngokokuhambelana noko.
Ukuba ikhadi libonakala liguquliwe, oko kuthetha ukuba ufuna ukuba nokuziphatha okunemvukelo, okungaphaya kwemida yento echanekileyo. Kwaye usenokungakuqondi okulungileyo nokubi. Kule meko, kubalulekile ukubonisa iimvakalelo zethu kwabo sibathandayo, okanye kubantu abanokusinceda sifumane isisombululo ngeendlela ezahlukeneyo (ootitshala, abazali, abanye).